musha nyika dzakabatana Singers Khalid Robinson Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara Yemumhanzi Superstar. Icho chifukidziro chizere cheKhalid Robinson Childhood Nyaya, Biography yake, Vabereki, Chokwadi chemhuri, ruzivo rwehupenyu hwepakutanga, uye zvimwe zviitiko zvine mukurumbira kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakawana mukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevamiriri veAmerica anokurumidza kumuka weR & B Artist. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezve Khalid Robinson's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Khalid Robinson Nyaya dzeChidiki Chemwana:
Khalid Donnel Robinson akazvarwa musi wegumi nemana waFebruary 11 kuna amai vake, Linda Wolfe uye baba vake avo ruzivo rudiki runozivikanwa nezvake muFort Stewart, Georgia. Ndiye ega mwana anozivikanwa akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Linda Wolfe nababa vake.
Amai vaKhalid Robinson, Linda Wolfe.
Nyika yeAmerican yenyika yeAfro-American dzinza rine hunhu hwemhuri hunoramba husinganzwisisike kune nyika ruzivo rwakawanda ruchiri kuzoratidzwa pamusoro pemidzi yemhuri yake. Pandaive mudiki, Khalid aive aine zvinoitika zvakafanana Morgan Freeman, akarerwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzinoti; Fort Campbell muKentucky, Fort Drum muWatertown, New York, uye Heidelberg, Germany.
Paaive mukomana mudiki, akasangana nezviitiko zviviri zvikuru zvinosuwisa. Kutanga, hukama pakati pevabereki vaKhalid Robinson hwakaparara pakutanga, izvo zvinotungamira kurambana. Makore mashoma mushure mekurambana, imwe nhamo yakatevera. Panguva ino, murombo Khalid akaona kufa kwababa vake. Little Khalid akarwadziwa nezviitiko zvinosiririsa izvo zvakaramba zvichizaruka mumhuri yake uye zvakaita kuti amai vake vave iye nyaradzo anovimbwa naye.
Khalid Robinson Dzidzo Uye nebasa Kuvaka:
Makore mashoma mushure mekufa kwababa vake, Khalid naamai vake vakatama kubva kuGermany kwavakanogara kwemakore matanhatu vachienda kuEl Paso, Texas uko akanyoreswa kudzidza kuAmerican High School.
Khalid Robinson akapinda muAmerican High Chikoro.
Paaive mumakore ake achiri mudiki kuThe Americaas High School, Khalid akadzidza kuimba nekutamba nziyo. Tarenda rake mumimhanzi rakamuita mukurumbira pasina nguva iri kure uye rakamuita chinangwa chikuru kune vakadheerera vaive negodo nezvaakawana.
Khalid Robinson Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Khalid akambotanga achida kuve mudzidzisi wezvemumhanzi asi akazozviwana achinyatsoita mumimhanzi kupfuura zvaakanga afungidzira kuti akatanga kurekodha nziyo nekuzvirodha kune rake reScrcloud peji achiri kuChikoro High.
VERENGA Dolly Parton Nyaya Yekuchecheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Mukuda kwekunyora rwiyo rwakakodzera rwekuvandudza, Khalid akashanda pasina simba kuti ave nechokwadi chekuti hunyanzvi hwake hwakarohwa. Akasangana nemugadziri Josh Scruggs anozivikanwa zvikuru semugadziri Syk uyo akamukoka ku studio yake muAtlanta.
Khalid Robinson akakumbira rubatsiro rweMugadziri Syk paainyora rwiyo rwekurudzira.
Khalid Robinson Road To Fame Nyaya:
Khalid Robinson aifanira kugara achifamba kubva kuEl Paso kuenda kuAtlanta kuitira kuti ave nechokwadi chekuti anokwanisa kuuya nerwiyo rwaizoenderana nemukurumbira wake kuchikoro. Kutsunga kwake rwiyo rutsva kwakauyawo pamwe nemutengo mukuru.
Pakutanga, Khalid mudiki aifanira kufamba kubva kuEl Paso kuenda kuAtlanta kunonyora rwiyo rwakanaka rwekurudzira.
Aive nematambudziko mukusangana nemamwe marongero ake aifanira sezvo aifanira kuenda kumakirasi pamwe nekushandisa nguva parwiyo rwaaishanda pariri. Kuedza kwaKhalid hakuna kutambiswa sezvo akakurumidza kuburitsa yake yeChikoro chepamusoro hunyanzvi - Nzvimbo - muna Chikunguru 2016.
Khalid Robinson Kukwira Kuzivikanwa Nhau:
Paakapedza ake ega "Location" Khalid akaisa nhamba mbiri paBillboard Twitter Emerging Artists chati uye pakupera kwegore 2016, akatarawo nhamba makumi maviri paUS Mainstream R & B / Hip-Hop Airplay chati. Akakurumidza kusvika paTop 20 pane iyo US Hot R&B Nziyo 'chati uye akatanga vhidhiyo yemimhanzi ye "Nzvimbo" pane Iyo Fader webhusaiti.
Ndiye chifukidziro chake chekutanga - nzvimbo.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi bio, Khalid Robinson ndomumwe wevamiriri vekuAmerica anomhanya nekukurumidza weR & B Artist uyo akaita mucherechedzo muindasitiri yevaraidzo nenjanji yake ichangoburwa "Kutaurisa" iyo yakaburitswa pazuva rechinomwe raKukadzi 7. akawana mibairo yakati wandei kubva paakakwira mukurumbira uye akagashira ake mashanu ekutanga basa yeGrammy Award kusarudzwa pa2019th Grammy Awards.
Khalid Rodinson akasarudzwa pamabasa mashanu eGrammy Awards muna 2018.
Khalid Robinson Hukama Hupenyu Chokwadi:
Khalid Robinson haana kuroora panguva yekunyora iyi bio. Nyeredzi ine tarenda iri kusimuka yakachengetedza hupenyu hwake hwerudo. Kunyangwe Khalid achida kupedza nguva aine dzinoverengeka shamwari dzake dzechikadzi, haana kuburitsa pachena kana paine wavo kunyanya musikana wake.
VERENGA Jay-Z Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Nekudaro, vazhinji vevateveri vaKhalid Robinson vanonzi vari kufungidzira kuti anogona kunge achidanana pakavanda nemuimbi wechishanu wekudyidzana Normani Kordei anozviti anozviti BFF waKhalid.
Ivo Loverboy naNormani Kordei vanofungidzirwa kuve vachidanana.
Khalid Robinson Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Muimbi wekuAmerica ari kusimukira uye munyori wenziyo anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Muchikamu chino, tinokuunzira rumwe ruzivo nezve mhuri yaKhalid Robinson kutanga nevabereki vake.
Zvizhinji nezve baba vaamai vaKhalid Robinson:
Linda Wolfe ndiamai vaKhalid Robinson. Akashanda muchiuto sehunyanzvi hwekupa uye akazova nhengo yeArmy chorus. Rudzi rwebasa rake raive chikonzero nei vaigara vachifamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Linda Wolfe nababa vaKhalid vakaparadzana Khalid Robinson achiri mudiki. Baba vaKhalid vakazourayiwa mutsaona yemotokari yakakonzera kushushikana kwakawanda panguva yehudiki hwake. Khalid akaburitsa pachena kuti amai vake ndicho chinhu chikuru chakamukurudzira chakaita kuti awedzere kufarira mimhanzi. Akange atanga kuda kuve muimbi weR $ B kumashure muma1990 uye akaitisa nebhendi remauto eUS achishanda nemauto.
Zvimwe Zvizhinji nezvehama dzaKhalid Robinson uye hama:
Khalid Robinson haana hama uye hanzvadzi uye hakuna kumbove neruzivo maererano nasekuru nababamunini vake. Kuenderera mberi kumadzitateguru ake, kwave pasina ruzivo nezve sekuru vaamai vaKhalid Robinson naambuya pamwe nasekuru nasekuru vake. Uyezve, haana vazukuru uye vanababa panguva yekunyora.
Khalid Robinson Hupenyu Hwechokwadi Zvekare:
Kure kure nemumhanzi waKhalid Robinson unoedza, tinokuunzira chokwadi nezvehunhu hwake kuti akubatsire kukupa mufananidzo uzere wake. Kutanga, Khalid Robinson's Persona isanganiswa yeAcarius Zodiac maitiro.
Anogara achinakidzwa nokuchengeta hupenyu hwake hwepachivande uye asina kunyatsofarira kuburitsa pachena zvaari kuita uye zvaanofarira kuita. Khalid ane hanya zvakanyanya nekuvandudza basa rake remimhanzi uye akatarisana nekuwana zvakanaka zvakabudirira muindasitiri yevaraidzo.
Khalid Robinson Lifestyle Chokwadi:
Khalid Robinson ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora mazana matatu emadhora panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunobva zvakanyanya kubva pamimhanzi yake yekuridza apo kuongororwa kwemashandisiro ake nemararamiro achiri chakavanzika. Kubvira paakapinda murunyararo rweindasitiri yekushambadzira, muimbi wechidiki ari kusimuka akataura zvishoma nezvepfuma yake yemari uye haana kana kufarira kuratidzira pfuma yake panhepfenyuro yemagariro.
VERENGA John Legend Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Khalid Robinson ane imba inogara Encino, nharaunda yepasi peguta yeSan Fernando Valley. Imba yake chivakwa chakagadzirwazve chinoda kuita madhora miriyoni nemakumi mapfumbamwe nemashanu uye yakarembera pamusoro penzvimbo yepasi pemamita mazana maviri nemakumi matanhatu nenomwe. Khalid Robinson akarongedza mifananidzo yakawanda inoratidza iye achipa nemhando dzakasiyana dzemotokari dzisingazivikanwi pama media enhau, asi kwete zvakawanda zvinozivikanwa pamusoro pekodzero yake yehukamuri kune idzo mota.
Iwo akasimukira masimendi madhirezi kuti aenzane sezvaaigona neBlue yake BMW Mota.
Khalid Robinson Chokwadi:
Kuputira yedu Khalid Robinson nyaya yehucheche uye biography, heano zvimwe zvishoma-kuzivikanwa chokwadi pamusoro pake izvo zvichakubatsira iwe kuti unzwisise zvakakwana mufananidzo weBio yake.
Chitendero: Vabereki vaKhalid Robinson pakutanga vakave nechokwadi chekuti akarererwa mutsika nekutenda kwekutenda kwechiKristu. Sezvo iye achikura muzera, akazivisa kune vateveri vake kuti kunyangwe hazvo akaberekerwa mumhuri yechiKristu, haazvione semunhu anonamata zvakanyanya.
Tattoo: Khalid Robinson haana kufarira inking tattoos mumuviri wake uye haana kuisa chero tattoo mumuviri wake. Kunyangwe Khalid asina kuisa kufarira ku inking, vateveri vake vachiri kumirira vachitarisira kuti vaone kana iye anouya muimbi anozoita kufarira kuisa tattoo mumuviri wake munguva iri pedyo.
Kunwa uye Kusvuta tsika: Panguva yekunyora, hapana nhengo yemhuri yaKhalid Robinson kusanganisira iye akaonekwa achiputa fodya kusanganisira kunwa zvakare. Sezvo achiri achiri mudiki muimbi, kufarira kwake kwakangotenderedzwa kuti kuve kwakakura mumimhanzi pane kungoita chero kutsvagwa kwekukanganisa senge kunwa uye kuputa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Khalid Donnel Robinson Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!